China Abakhiqizi Bokuhlola i-Cryptococcal Antigen kanye nabaphakeli | I-Liming Bio
IStrongStep® I-Cryptococcal Antigen Rapid Test Device yindlela esheshayo yokuhlolwa kwe-immunechromatographic ukuthola i-capsular polysaccharide ama-antigen we-Cryptococcus species complex (I-Cryptococcus neoformans kanye I-Cryptococcus gattii) ku-serum, i-plasma, igazi eliphelele kanye ne-cerebral spinal fluid (CSF). Isilingo isilingo esisetshenziswa ngudokotela esisebenzisa i-laboratory esingasiza kufayela le-ukuxilongwa kwe-cryptococcosis.
I-Cryptococcosis ibangelwa yizo zombili izinhlobo zezinhlobo eziyinkimbinkimbi ze-Cryptococcus (I-Cryptococcus neoformans ne-Cryptococcus gattii). Abantu abakhubazekileUkuzivikela komzimba okulawulwa ngamaseli kusengozini enkulu yokutheleleka. I-Cryptococcosis ingenyekwezifo ezingosomathuba ezivame kakhulu ezigulini ze-AIDS. Ukutholwa kwe-I-antigen ye-cryptococcal ku-serum ne-CSF isetshenziswe kakhulu kakhulu ukuzwela okuphezulu nokucaciswa.
IStrongStep® I-Cryptococcal Antigen Rapid Test Device yakhelwe ukwenziwa thola izinhlobo zezinhlobo ze-Cryptococcus ngokuhumusha okubonakalayo kombala ukuthuthuka emgqeni wangaphakathi. Ulwelwesi lwalunama-antiI-Cryptococcal monoclonal antibody esifundeni sokuhlola. Ngesikhathi sokuhlolwa, isampulakuvunyelwe ukusabela ngama-anti-Cryptococcal antibody anti-particals anemibala ama-conjugates, abephekiwe kuphedi yokuhlangana yesivivinyo. Ingxube keihambisa ulwelwesi ngesenzo se-capillary, futhi ihlanganyele nama-reagents ku- ulwelwesi. Ukube bekukhona ama-antigen anele e-Cryptococcal kuma-specimens, anemibalaband kuzokwakhiwa esifundeni sokuhlola ulwelwesi. Ubukhona baleli qembu elinemibalaikhombisa umphumela omuhle, kanti ukungabikho kwayo kukhombisa umphumela ongemuhle. Ukubukekayebhendi enemibala esifundeni esilawulayo isebenza njengokulawulwa kwenqubo. Lokhu kukhombisalelo volumu elifanele le-specimen lingeziwe futhi ukukhishwa kwe-membrane kunakho kwenzeke.
■ Le khithi yenzelwe ukusetshenziswa kwe-IN VITRO kokuxilonga kuphela.
■ Le khithi ingeyokusetshenziswa kobuchwepheshe kuphela.
■ Funda imiyalelo ngokucophelela ngaphambi kokwenza isivivinyo.
■ Lo mkhiqizo awunazo izinto zomthombo womuntu.
■ Ungasebenzisi okuqukethwe kwekithi ngemuva kosuku lokuphelelwa yisikhathi.
■ Phatha zonke izibonelo njengezingahle zitheleleke.
■ Landela inqubo ejwayelekile yeLab kanye nemihlahlandlela yokuvikela ukuphathwa kanye ukulahlwa kwezinto ezingatheleleka. Lapho inqubo ye-assayqedela, lahla ama-specimens ngemuva kokuwakha ngokuzenzakalela ngo-121 ℃ okungenani 20 amaminithi Ngenye indlela, zingelashwa nge-0.5% Sodium Hypochloriteamahora ngaphambi kokulahlwa.
■ Ungafaki i-pipette reagent ngomlomo futhi ungabhemi noma udle ngenkathi wenza Izilingo.
■ Gqoka amagilavu ​​ngesikhathi senqubo yonke.
Langaphambilini IChlamydia Antigen
Olandelayo: Ukuhlolwa kwe-HSV 12 Antigen
Ukuhlolwa Okusheshayo Kwe-Sars-Cov-2 Antigen
Ukuhlolwa kweSars-Cov-2 Antigen Rapid
Ukuhlolwa kweSars-Cov-2 Antigen
H. Pylori Ag Ukuhlolwa Okusheshayo Kuthola I-Antigen, ICoronavirus Antigen Test Kit, Inoveli Coronavirus Rapid Test Ket, IVibrio Cholerae O1 / O139 Ukuhlolwa Okusheshayo Kwe-Antigen Combo, Ikhithi Yokuhlola ye-Igm / Iggrapid, ICoronavirus Yokuhlolwa Kwe-Covid-19,